उमेर बढेसँगै शरीरमा देखिने यी ८ परिवर्तन - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ उमेर बढेसँगै शरीरमा देखिने यी ८ परिवर्तन
हेल्थ आवाज बुधबार, २०७८ मंसीर १ गते, १२:२९ मा प्रकाशित
५० वर्षको उमेरमा शरीर धेरै परिवर्तनहरूबाट गुज्रिन्छ। यस उमेरमा, शरीरभित्रबाट कमजोर हुँदै जान्छ र शरीरका धेरै भागहरू पहिले जस्तो काम गर्न सक्षम हुँदैनन्। ५० वर्षको उमेर पार गरेपछि शरीरमा देखिने परिवर्तन र स्वस्थ रहनको लागि यस उमेरमा जीवनशैली कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बारे जानौं ।
१. मस्तिष्कमा प्रभाव
५० वर्षको उमेरमा मस्तिष्क को कार्य पनि बढ्ने गर्छ। यद्यपि ५५ वर्षको आसपास दिमागमा तनावका कारण स्मृति बिस्तारै कमजोर हुन थाल्छ। यस उमेरमा स्मरण शक्ति बढाउँन मेडिटेरेनियन डाइट अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै:- धेरै फलफुल खाने, तरकारी, अनार र हेल्दी फ्याट समाबेश गर्ने।
जहाँसम्म, महिलामा यस उमेरमा मनोपोजको कारण कयौं प्रकारका हार्मोन परिवर्तन हुन्छन् जसले उनीहरूको मुडलाई असर गर्दछ। धेरै मानिसहरू यस उमेरमा बिरामीको कारण डिप्रेसनमा जान्छन्। यस्तोमा आफूलाई सक्रिय राख्नुहोस् र केही काममा आफुलाई व्यस्त राख्नुहोस्। व्यायाम गर्न पनि छाड्न हुँदैन।
२. प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर
यस उमेरमा पुगेपछि प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुन थाल्छ र संक्रमणसँग लड्ने कोषहरू पहिले जत्तिकै बलियो रूपमा काम गर्न सक्षम हुँदैनन्। यस कारणले गर्दा फ्लू, निमोनिया र टिटानसबाट बिरामी हुने जोखिम बढ्छ। यो उमेर फ्लू खोप लगाउनु पर्छ।
३. श्रवण क्षमतामा प्रभाव
यो उमेरका ४० प्रतिशत व्यक्तिले सुन्ने क्षमता गुमाउँदछन्। उच्च रक्तचाप, हृदय समस्या वा मधुमेह जस्ता रोगहरूको प्रभावको कारण एक उमेर पछाडि सुन्ने शक्ति पनि कम हुन्छ। यदि तपाईंलाई पनि त्यस्तो समस्या छ भने, डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र जाँच गर्नुहोस्।
४. हड्डीहरूमा प्रभाव
बढ्दो उमेरसँगै हड्डीहरू बिस्तारै कमजोर हुन थाल्छ। यस उमेरमा, कोषहरू टुट्ने जोखिम बढ्छ। तपाइले यससमय धेरै क्याल्सियम र भिटामिन डीयुक्त खानेकुरा खानुपर्दछ। हड्डीहरूलाई बलियो पार्न व्यायाम गर्नुहोस्।
५. मांसपेशीहरु र जोर्नीमा प्रभाव
उमेरको सबैभन्दा बढी मांसपेशीहरुमा प्रभाव पर्छ। तपाईको शारीरिक शक्ति कमजोर हुन थाल्छ। यो बलियो बनाउनको लागि प्रशिक्षण सहितको व्यायाम गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसले तपाईको मांसपेशीको घनत्व बढाउनेछ र सन्तुलन पनि सहि हुनेछ। जोर्नी दुखाई पनि यो उमेरमा ठुलो समस्या बन्छ।
६. हृदय प्रभाव
यो उमेरमा हृदयघातको जोखिम बढ्छ। यसलाई रोक्नको लागि व्यायाम गर्नुपर्दछ। यसबाट बच्न प्रत्येक दिन ३० मिनेट हिंड्नुहोस्। आफ्नो वजन बढ्न नदिन रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। यदि तपाईं धुम्रपान गर्नुहुन्छ भने यो उमेर पछि सिगरेटबाट टाढा हुनुहोस।
७. कपाल र छालामा प्रभाव
यस उमेरमा कपाल सेता, पातलो र धेरै कमजोर हुन्छ। विशेषगरी पुरुषको कपालमा उमेरको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। यद्यपि यसमा चिन्ता लिने कुनै कुरा छैन। यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने तपाईं यसलाई रङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस समयमा स्किनमा दाग बन्न सक्छ र रुखो पनि हुन्छ। छालाको क्यान्सरको जोखिम पनि बढ्छ। त्यसैले कुनै पनि समस्यालाई वेवास्ता नगर्नुहोस् र समयमै डाक्टरलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सनुहोस्।
८. आँखामा प्रभाव
यदि तपाईले केही पढ्ने क्रममा आँखालाई जोड लगाउन पर्छ भने यसको मतलब उमेरको प्रभाव तपाईको आँखामा पनि परेको छ। खैर, यस समयमा मानिसहरूलाई प्रायः चश्मा आवश्यक छ। आफ्नो आँखा नियमित जाँच गर्नुहोस्।
परीक्षण – यस उमेरमा रोगका धेरै प्रकारका हुने जोखिम बढ्छ। तसर्थ, कोलन क्यान्सर, म्यामोग्राम टेस्ट, प्रोस्टेट क्यान्सर र टेस्टिकुलर क्यान्सरको लागि जाँच गराउनु पर्दछ। कुनै पनि प्रकारका लक्षणहरूलाई वेवास्ता नगर्नुहोस् र यदि घरमा कुनै आनुवंशिक रोग चलिरहेको छ भने तपाईको डाक्टरलाई बताउनुहोस्। उनीहरुले केही अन्य परीक्षण गर्न पनि सल्लाह दिन सक्छन्।